5 သင့်မီးဖိုချောင်အဘို့ကြော့ဖြူကျောက် | Flodeal Inc မှ.
သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်ကြည့်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ White ကကျောက်ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြု. အဖြူမဆိုခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးနှင့်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကျောက်ဆိုမီးဖိုချောင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ကြည့်ပေးသောတောက်ပအရောင်အသုံးပြုသည်. အဆိုပါ White ကကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်မီးဖိုချောင်အောင်အသုံးပြုသည် & အခင်း. ဤတွင်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်များအတွက်အကောင်းဆုံး White ကကျောက်များ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်ကျောက်ခင်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, worktop, နှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်. အဆိုပါကက်ရှမီးယား White ကကျောက်တဲ့ယူနီဖောင်းများနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမီးဖိုချောင်တစ်ဦး stunningly ကြော့နှင့်တောက်ပကြည့်ပေးသည်. ဤသည်ကျောက်သဘောသဘာဝအတွက်အလွန်တန်ခိုးကြီးကြောင်းပေါက်ကိုဖောက်ပေးထားတယ်ရှိသည်ပါဘူး. အပူနှင့်အအေးခံနိုင်ရည်, သငျတို့သကိုသုံးနိုင်သည် ကက်ရှမီးယား White ကကျောက် အခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ဖျား၌.
မြစ် White ကအိန္ဒိယကနေအခြားလူကြိုက်များ White ကကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အများကြီးကိုအသုံးပြုသည်. အဆိုပါ မြစ် White ကကျောက် Grey ကနှင့်ဘရောင်းမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကပိုမိုလှပသောကြည့်. အဆိုပါမြစ် White ကကျောက် 60 အဖြစ်အခင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်×60 သို့မဟုတ် 24″ x က 24″ အုပ်ကြွပ်. အလားတူ tile ကိုနှင့်ကောင်တာသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်များအတွက်ခေတ်မီကြော့ပေါင်းစပ်စေမည်.
alaska White ကအိန္ဒိယကနေအသစ်တစ်ခုကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအညိုများနှင့်ချယ်ရီမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်နှင့်အတူဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. အဆိုပါ alaska White ကကျောက် အညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူအဖြူရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. ဤသည်ကျောက်တဲ့ပရီမီယံပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ဒီကျောက်ကို install အမြဲအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းမီးဖိုချောင်ထိပ်ထက် သာ. ကောင်း၏. သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်ထဲမှာ Alaska White ကကျောက်ကြည့်ဖို့ခစျြလိမျ့မညျ.
မွန်း White ကကျောက်သို့မဟုတ်ကက်ရှမီးယားပုလဲကျောက်အလတ်စားဘတ်ဂျက်မီးဖိုချောင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အဆင်းလှသောအဖြူရောင်ကျောက်သည်နှင့်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမီးဖိုချောင်ဘို့အကြံပြု. သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် မွန်း White ကကျောက် အဆိုပါအခင်းကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာ. 60×60 မွန်း White ကကျောက်၏ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများဟာမီးဖိုချောင်၏အခင်းအဘို့အလွန်ကောင်းပါတယ်. သင်တို့သည်လည်း backsplash အတွက်လအဖြူရောင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, အခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ထိပ်.
သင်တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်, ပရီမီယံမျက်နှာပြင်ကျောက်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကိုအကောင်းဆုံး option ဖြစ်တယ်. သင်တစ်ဦးကြီးမားသောစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းကိုအတွက်ပလက်တီနမ် White ကကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, အိမ်မှာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဇိမ်ခံအသုံးပြုမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ. ပလက်တီနမ် White ကကျောက် အလွန်ပရီမီယံမျက်နှာပြင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. Luna ပုလဲ P ကို ​​White ကကျောက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနာမတော်သည်.
ဒါဟာကုသမှုသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါဘူး. The Platinum White Granite is one of the favorite stone for big projects due to its low maintenance cost and cheap landing prices.
Jasmine White က
Flodeal Inc မှမှာ, ကျွန်တော်လက်ကားအတွက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအမျိုးအစားအားလုံးကိုလုပ်တင်ပို့. One container carries approximately 260 ကောင်တာများ. သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှလက္ကားထဲတွင်ကျောက်ကောင်တာဝယ်နိုင်.